Ciidamadda PSF oo deeq dawo ah garsiyeey Cisbitaalka Baran (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 1, 2018 3:14 g 1
Ciidamadda Difaaca Puntland ee PSF oo degaanadda Puntland kasameeya caawinta Shacabkooda ayaa maanta Deeq dawo ah ku wareejiyaay Maamulka Cisbitaalka Baran ee gobalka Sanaag.
Deqdan Dawadda ah waxaa Ciidamadda PSF ka gudoomay Guddoomiyaha Gobalka Sanaag Maxamuud Ciyoon Maamulka Cisbitaalka iyo Taliyaha Ciidamadda Daraawishta Puntland ,iyago uga mahadceliyaay Ciidaadda sida ay ugu adeegayaan shacabkooda.
Saraakisha PSF ayaa dhinaca kale sheegay inay si wadi donaan Caawinta shacabkooda,iyago sheegay inay dhir ku beeri donaan Jaamacada Maakhir oo ah jaamacad u samaysan Qaab casri ah.
ASKARI DAAWO BIXINAYA WAA WAX LAGA YAABAY!.
MA ASKARTII BAA WASAARADA CAAFIMAADKA ISU BEDESHAY.
TAASI WAA WAXYAABAHA LAGU GARTO IN MAAMULKU FASHILMAY!.